मेरा सपनाहरु : बाहुनक्षेत्रीले किन आन्दोलन नगर्ने?
गलत निष्कर्ष ... बिद्वान र उभो लागेका भनेका बाहुन क्षेत्री ले नै आन्दोलन गर्न थाले भने अरुलाई रोक्न के बहाना बांकी रहन्छ र ? यस्तो मान्छे उचाल्ने र सद्भाव बिगार्ने लेख लेख्नु राम्रो होइन
यमुना जी को लेखमा यथार्त पाए । मिलन जी बाहुन छेत्रीमा सबै बिद्वान र उभो लागेका मान्छे मात्र छैनन होला । वास्तवमा हालको सबैको लागी अंशबण्डा लाग्न लागेको यो देशमा सायद यै बर्गको मात्रै होला कतै नाम निशान नदेखिएको । कुरा आन्दोलनको मात्रै होइन । आन्दोलन् गर्न त सक्थे होलान यसरि आन्दोलनकै खेलले सबैको मागहरुलाई आगाडि सारेको बेलामा तर सहनशिल केहि हदसम्म बुद्विजीवि भएकै कारण समयले निम्त्याएको परिवेशलाई स्विकार्दैछन । मलाई लाग्छ सरकारले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन् नदियोस कुनैपनि बर्ग वा जातजातिलाई आउदा दिनहरुमा ।
प्रस्तुत लेखमा समाबेश गरिएका तथ्य हरु सहिनै हुन् तर यसमा अर्ध सत्यता भने लुकाइएको छ। देशका सबै क्ष्येत्रमा हैकम चलाऊने धेरैजसो छेत्री बाहुन नै हुन् । यी शासक हरुले नै यी दलित र पिछडिएका हरुको शोषन र दमन भएको छ, तेसैले ती बर्गहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु परेका हुन, दु:खको कुरा त यो सरकारले सबैको चित्तबुझ्दो र माग अनी अधिकार सम्बोधन हुने शासन पद्धती समयएमै ल्याउन सकेन र जन्धन्को क्षेती भएपछिमात्र माग सम्बोधन गर्नेकाम भयो र यो परम्पर निरन्तर चलिरहेको छ । तेसैले यो माथिल्लो स्तरमा रहेका बाहुन छेत्री ले पनि आन्दोलन गरेर अधिकार अझै खोजियो भने, जातिय र बर्गिय लडाइ हुने सम्भावना प्रसस्त देखिन्छ । तेसैले दुर्दर्शी भएर, लेख लेख्ने अनी बिखन्डन होइन मिलाप को सन्देश सबैको सामु प्रचार गरेमा एक दिन नेपाल एक सु सम्पन्न र सर्बभौम स्वाभिमानी मनिसहरुको देश हुनेछ, होइन त??